Ahoana no hitrangan'ny tafio-drivotra fasika sy vovoka? | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Ahoana no hitrangan'ny tafio-drivotra fasika sy vovoka?
Monica sanchez | | Fisehoan-javatra amin'ny toetr'andro
ny tafio-drivotra fasika sy vovoka Izy ireo dia fisehoan-javatra tsy mampino, ary atahorana koa raha sendra anao izy ireo. Azon'izy ireo atao ny mampihena ny fahitana ny tanàna iray manontolo ao anatin'ny minitra vitsy, ary maharitra fotoana fohy izy ireo vao manjavona.
Raha te hahafantatra ny famokarana izy ireo dia aza esorina amin'ny masonao ny masonao fa hanazava amin'ny antsipiriany izahay inona ireo ary maninona no mitranga ireo tafio-drivotra hafahafa ireo.
Matetika ny tafio-drivotra fasika sy vovoka dia tsy mahasarika antsika, satria amin'ny fampihenana ny fahitana dia mampidi-doza tokoa izy ireo eny an-dalana. Na izany aza, misaotra azy ireo, azo alaina ny ala toa ny an'ny Amazon, noho izany dia manana lafy tsara be ihany koa izy ireo.
Toy ny rivo-pasika tsy mitovy amin'ny oram-baratra, ho hitantsika misaraka izy ireo:
1 Tafio-drivotra fasika
3 Ahoana no fomba namoronana azy ireo?
4 Ahoana no hiarovanao tena amin'ny tafio-drivotra na vovoka?
4.1 Ao anaty fiara
Ny tafiotra sandam-borona dia amoron-tsiranoka avy amin'ny faritra maina tsy mihetsika ambonin'ny tany. Rehefa mitombo ny hafainganam-pandehan'ny rivotra sy ny haavon'ny rivotra dia aondraka miakatra ireo sombin-javatra ireo afaka mandeha lavitra lavitra.
Ireo tany namokarana betsaka azy ireo dia ireo tany zara raha misy zavamaniry ny sasany, ny zava-misy izay manohana ny sombintsombina alaina ambony. Ohatra, any amin'ny tany efitra Sahara na any amin'ny lemaka amoron-tsirak'i Amerika Avaratra dia tena fahita izy ireo.
Ny fahasamihafana lehibe ananan'ireo karazana tafio-drivotra ireo amin'ny fasika dia ny fandrefesana ireo sombintsombiny miato. Amin'ity tranga ity dia latsaky ny 100 microns izy ireo, izany hoe 0'01000000cm, toetra iray ahafahan'izy ireo midadasika kokoa, afaka mampahatsiahy antsika fa maloto ny tontolo iainana. Ankoatr'izay, noho ny toetrany dia misoroka ny fisian'ny rahona izy ireo, hany ka somary zara raha misy ny rotsakorana any amin'ireo faritra misy azy ireo.
Ny toerana nitrangan'izy ireo matetika dia ny tany efitra Sahara, izay tompon'andraikitra amin'ny vovoka mahatratra ny firenentsika ny rivotry ny varotra, indrindra mandritra ny fahavaratra.
Ahoana no fomba namoronana azy ireo?
Ho an'ny fananganana an'io karazana trangan-javatra io dia ilaina ny fisian'ny a mifanohitra amin'ny hafanana eo anelanelan'ny tany sy ny sosona afovoany sy ambony amin'ny atmosfera. Noho ny hafanan'ny tany dia mafana kokoa, ny mason'ny rivotra, miaraka amin'ny vovoka entiny avy aminy, dia mety hahatratra ny haavon'ny troposfera avo. Saingy tsy mifarana eo izy io, satria ilain'izy ireo io rivotra io mba hifandonana amin'ny zavatra mangatsiaka kokoa mba hiakarany avo kokoa aza; SY Izany no hataon'ny rivotra mangatsiaka avy amin'ny sosona avo indrindra amin'ny atmosfera.
Noho izany dia tsy maintsy misy ny rafitra anoloana eo amin'ny faritra iray izay manana velarana mafana sy maina. Ny rafi-drivotra anoloana dia mangatsiaka, mampiala ny rivotra mafana ao amin'ny efitrano, ka mitombo ny gradient pressure. Amin'izany fomba izany dia mitombo koa ny hafainganan'ny rivotra, mijoro eo anelanelan'ny 80 sy 160km / h, miteraka fikorontanana. Ny maripana ambonimbony, satria mafana be, dia miteraka onjam-pivoarana.
Ireo sombin-javatra ireo dia afaka mijanona mihantona amin'ny rivotra mandritra ny fotoana ela.
Ahoana no hiarovanao tena amin'ny tafio-drivotra na vovoka?
Fisehoan-javatra mampihena ny fahitana, tokony hitandrina tsara isika raha mahazo a. Na mipetraka amin'ny faritra misy azy ireo mahazatra ianao na raha sendra sendra sendra azy ireo dia zava-dehibe ny fahalalana ny fomba fihetsika mba hahafahanao mivoaka amin'izany tsy voa.
Ao anaty fiara
Raha mitondra fiara ianao ary mahita tampoka fasika na vovoka manatona anao, dia afaka manao zavatra roa ianao:
Mandalo azyraha mbola afaka mahatratra ny hafainganam-pandeha farany azo avela tsy hampidi-doza olona.
Mijanona eo an-jorony ary miandry. Io no safidy azo atolotra indrindra, fa ilay iray ihany koa matetika manahy indrindra, satria ho hitanao fa mifono fasika ianao, ary tsy hahita na inona na inona mandritra ny minitra vitsy. Mba hahazoana antoka fa tsy hisy zavatra hitranga aminao, mankanesa any amin'ny soroka (na tsara kokoa, miala amin'ny arabe raha azonao atao), ary akatona ny varavarankely.
Raha misy tafio-drivotra na vovoka namely anao rehefa mandeha ianao, ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny manaron-tava ny oronao sy ny vavanao. Raha manana ianao, asio jelly solika ao anaty vavoronao mba tsy ho maina izy ireo.
Vantany vao vita dia tsy maintsy arovanao ny masonao. Mba hanaovana izany dia azonao atao ny miaro ny tarehy amin'ny sandry iray, na manao solomaso misy rivotra. Tokony ho fantatrao fa ny solomaso mahazatra dia tsy miaro be loatra amin'ny sombintsombiny; ampiasao tsara kokoa ny airtight.
Ankehitriny, mila mitady fialofana ianao. Ny tena atolotra dia midira amin'ny faritra leeward (izany hoe miaro amin'ny làlana alehan'ny rivotra izy), toy ny ao ambadiky ny hazo lava na hazo rofia; ary isaky ny afaka manao izany ianao dia miasà amin'ny toerana avo.
Ary farany, miarova tena amin'ny zavatra mavesatra izay afaka manidina. Ampio ny kitaponao, na manakaiky ny tany araka izay tratranao.
Ny tafio-drivotra fasika sy vovoka dia mety miteraka olana maro, araka izany aleo ampandrenesina mialoha. Tandremo ny fampitandremana ny toetrandro ao an-tanànanao mba tsy ho voafitaka ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Fisehoan-javatra amin'ny toetr'andro » Ahoana no hitrangan'ny tafio-drivotra fasika sy vovoka?
Adrian Rodríguez Areal dia hoy izy:
Hitanareo, tsy haiko raha nahatsikaritra izy ireo; ary raha azon'ity pejy vakiana ity na; fa kosa, ny tonian-dahatsoratr'izany, dia mamporisika anao aho hanao izany, satria izay voalaza ato amin'ity antontan-taratasy ity dia fifanekena toy ny katedraly ary koa miaraka amin'ny antsipiriany izay raha ny hevitro; ary miantoka ny fahatsaran'ny pejy; Raha natao ho henjana sy kendrena ary atokisana araka izay azo atao miaraka amin'ny famoahana azy ity dia mamporisika anao aho mba hijery tsara ireto tonian-dahatsoratra / tonian-dahatsoratra ireto
Ao amin'ity antontan-taratasy ity dia voalaza fa ny tena maha samy hafa ny tadio sy ny tafio-drivotra dia ny tsy fitoviana eo amin'ny granules na poti-pototra mandrafitra na ny antony nahatonga an'io tadio io; raha ny tafio-drivotra polno dia voalaza fa vovoka ny vatan'izy ireo; Mifanohitra amin'ny fasika izay, araky ny anarany, izy ireo dia voan'ny fihoaram-pefy na ny fikorontanan'ny toetrandro vokatry ny toetran'ny rivotra vokatry ny famindran-toerana ny habakabaka, izay mahatonga ny fiakarana ny fasika sy ny fizotrany manontolo. Fa ny olana dia ny hoe oviana na oviana ny data momba ny refin'ny granules vovoka izay miteraka tadio vovoka no omena referansa dimensional; manondro sy milaza ao anaty lahatsoratra / ao anaty antontan-taratasy mazava tsara »» ara-bakiteny »: ireo vovoka vovoka dia manidina na manana habe kely kokoa noho ny 100 microns; na inona no mitovy, micrometre 100 µm; voasoratra miaraka amin'ny litera "mu" ho toy ny prehf an'ny rafitra iraisam-pirenena misy ny singa; manondro fa latsaky ny 0,1mm na> 0,1mm; izay refesiny dia mitovy amin'ny 0,0001cm fa tsy 0,01000000cm araky ny voalaza eo amin'ny pejy ary voalaza ihany koa fa mitovy izy. Midika izany fa lesoka amin'ny refy stratospherika ho an'ny lahatsoratra iray izay mody voajanahary amin'ny siansa. Ary inona no ratsy kokoa. Izy io koa dia miaraka amina singa manan-danja 7 manokana hanomezana azy henjana bebe kokoa; rehefa ny manao ny tena marina fotsiny dia ny manao ratsy kokoa ny toe-javatra na ilay fanambarana voalaza ao anaty antontan-taratasy.
Valiny tamin'i Adrián Rodríguez Areal
Oviana no nanomboka nisy fiantraikany tamin'ny toetrandro ny olombelona?